Total Eggscape bụ ihe ọhụrụ si Crescent Moon Games for Android | Gam akporosis
Total Eggscape dị ọhụrụ site na Crescent Moon Games dị ka ihe egwuregwu na-atọ ọchị
Jikwaa onye nzuzu, anya ọkụ ọkụ ọkụ Total Eggscape, nke kacha ọhụrụ site na Crescent Moon Games dị ka ikpo okwu nkịtị nke anyị ga-etinye otu akwa na nke ọzọ ka onye ọhụụ anyị wee nwee ike inwe ego.
Un egwuregwu freemium na mgbasa ozi na micropayments na nke anyị ga-enweta ego ọla edo ndị ahụ nke ga - enyere anyị aka ịgbanwe ọkụkọ nzuzu maka onye nzuzu ọzọ. Ka anyi jiri egwuregwu ohuru nke Android mee ya ihe eji eme pixel mara nma nke n’ile anya n’elu igwe di nma.
1 Nwa ara na ara ya na adi okuko
2 Egwuregwu ndị enweghị usoro na Total Eggscape
3 Ezi mechara
Nwa ara na ara ya na adi okuko
Total Eggscape bipụtara Crescent Moon Games, onye editọ na ụlọ ọrụ nyocha nke gosipụtara anyị nhọrọ amamihe ya ịmalite egwuregwu ndị wereworo anyị ọtụtụ awa nke ntụrụndụ, na nke na-abịazi oge egwuregwu a na-atọ ụtọ ma na-adọrọ adọrọ maka ekwentị anyị.
El ebumnobi bụ pịa na etiti ihuenyo ịga ayak otu akwa n'elu nke ọzọ wee si otú a mepụta otu kọlụm nke onye isi akụkọ a na-atọ ọchị na nke nzuzu dị. Anyị nwere ike ịmegharị mmegharị nke kọlụm ahụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji zere ihe niile ga-anwa ịkwụsị egwuregwu ahụ.
Site na-egbochi ọtụtụ ndị iro ọ ga - abụrịrị ihe niile anyị ga - ezere iru mkpụrụ ego ọla edo ndị ahụ nke ejiri akọ tinye na oghere ndị ga - etinye ọkụkọ anyị na anya oghere dị egwu.
Egwuregwu ndị enweghị usoro na Total Eggscape
Total Eggscape na-eji ọgbọ nke ọkwa etoju Iji ju anyị anya oge ọ bụla anyị na-egwu egwuregwu, n'otu oge na anyị ga-eche ndị isi ikpeazụ ga-etinye icing na achicha nke ihe efu a.
Ma ọ bụ ezie na egwuregwu na-enweghị usoro spawn na mgbochiEe, enwere ọganihu anyị ga-ahụ oge ọbụla anyị mechara egwuregwu ma ọ bụ ọkwa. Echere na anyị ga-agafere isi ọzọ iji mechaa ihe omume a nke sitere n'aka onye nchịkọta akụkọ maara nke ọma ihe ọ na-eme na egwuregwu ọ bụla ọ na-ebupụta na Storelọ Ahịa Play.
N'ezie anyị nwere ihe odide ma ọ bụ skins dị iche iche ị kpọghee na ego ndị ahụ ma ọ bụ site na micropayments: ọ bụ otu n'ime ụzọ abụọ nke Total Eggscape nwere monetize ihe dị n'onwe ya ezigbo ọghọm.
Ya mere, a hapụrụ anyị a ezi uto n'ọnụ gị na egwuregwu a si Crescent Ọnwa Games nakwa na obere ntakịrị ọ bụla ọ na-ebupụta ezigbo egwuregwu dị mma dị ka Rider.io site n'afọ gara aga. Egwuregwu na-atọ ụtọ inwe ụfọdụ egwuregwu ọsọ ọsọ.
Ihe osise ya bu ihe di egwu n'ihi anya ochie na n'ihi na-ewere dum vetikal nke a mobile na 18: 9 format na ihuenyo, otú ị pụrụ ịnụ ụtọ ya na-enweghị he egbupụsị ma ọ bụ ala dị ka ọ na-eme na ndị ọzọ egwuregwu. Egwuregwu a haziri nke ọma nke nwere nsogbu ziri ezi iji nọgide na-aga n'ihu.
Total Eggscape dị maka n'efu na Storelọ Ahịa Play inwe a fun oge si gị gam akporo mobile na ọzọ ọhụrụ egwuregwu si mpekere onwa Games.
A nkịtị na ezi risịrị na-risịrị na-enwe nzuzu ọkụkọ na bulging anya.
Ahụmahụ nke ọmụmụ ihe ahụ pụtara ìhè
N'amaghi eme na-etoju
Ezi nka pixel na uzo nile biri na 18: 9 ihuenyo
Ole na ole skins
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Total Eggscape dị ọhụrụ site na Crescent Moon Games dị ka ihe egwuregwu na-atọ ọchị